Ndewo Obodo 2048 bụ ihe mgbagwoju anya ohuru nke nwere otutu onu ogugu | Gam akporosis
Ndewo Town 2048 bụ ihe mgbagwoju anya ọzọ maka gam akporo nke na ewezuga ijikọ ọnụọgụ iji mechaa ọkwa ahụ, anyị ga-ewulite obodo anyị site na ụlọ na ebe pụrụ iche yana mkpụrụ ego ọla edo niile anyị nwetara.
Egwuregwu na-adịghị na Spanish, mana n'ime ya Kwesighi ịghọta ọtụtụ ihe iji nweta usoro ahụ isi ya. Ee ọ bụ eziokwu na ikekwe maka nka anyị ga-aghota ihe, mana ọ naghị ekpuchido ahụmịhe iri mmadụ ahụ na-eweta. Ka anyi jiri egwuregwu ohuru a nke onwa February 2021 bia.
1 Ikpokọta taịl nile iji ruo na nọmba anwansi ahụ nke 2048
2 Gbalịa akpụkpọ anụ ọhụrụ iji nwee ọ anotherụ n'ụzọ ọzọ na Hello Town 2048
3 Ihe mgbagwoju anya nke na-ejide gị
Ikpokọta taịl nile iji ruo na nọmba anwansi ahụ nke 2048
Ọ bụ ezie na ịgwa eziokwu na anyị ekwesịghị ịbanye na ya, na mkpụrụ ego anyị nwetara anyị ga-enwe ike mezue ụlọ ndị ahụ na-eme ka anyị mechaa ọkwa ndị gara aga.
Egwuregwu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na-agba anyị ume ka anyị jiri taịlị ndị ahụ rụọ nọmba. Nke ahụ bụ ịsị, a na - eme ọnụ ọgụgụ na - enweghị usoro na anyị ga - adaba na kọlụm 5.
N'ime ndị a ogidi na-agbakọta ibe ma ọ bụrụ na ọ nweghị nke kwekọrọ. Ya mere, ebumnuche anyị bụ ịjikọta ọnụ ọgụgụ yiri nke ahụ ka ha wee gbakwunye. Enwere ike ịmepụta njikọ ndị a ma n'ụzọ kwụ ọtọ ma n'ụzọ kwụ ọtọ, yabụ mgbagha na-arụ ọrụ n'ọnụ ya na mgbaghoju anya ọhụrụ a maka gam akporo.
Gbalịa akpụkpọ anụ ọhụrụ iji nwee ọ anotherụ n'ụzọ ọzọ na Hello Town 2048
Ọzọ nke isi ihe nke Ndewo Town 2048 bụ nnukwu akpụkpọ ahụ gị nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ọnụọgụ ndị ahụ maka akara ụlọ ma ọ bụ usoro ọzọ nke "aghụghọ" ndị dị ezigbo mma. Nke ahụ bụ, anyị nwere ike ịgbanwe isiokwu nke ibe.
Dị ka enwere ọtụtụ mmetụta enwere ike mepụta mgbe anyị jikọtara ọnụ ọgụgụ. Ihe mgbaru ọsọ dabere na inwe ike jikọta ọnụ ọgụgụ ka e wee jikọta ndị rụpụtara ya ndị ọzọ. Otu a anyị ga - eme ngwakọta nke na - ebute ọtụtụ ọla edo na ego ọla edo ndị ọzọ maka ụgbọ anyị.
Ihe omuma ndi ozo nke Hello Town 2048 bu na anyị achọghị njikọ iji kpọọ, ọ bụ ezie na anyị nwere mgbasa ozi na-adịgide adịgide n'elu (m bepụ ya na ihuenyo iji zere imetọ ahụmịhe ahụ); ma ị ga-enwe ya mgbe ị na-egwu egwu.
Ihe mgbagwoju anya nke na-ejide gị
Ma mgbe na mbụ, ọ nwere ike ịdị gị ka ọ baghị uru, ugbu a anyị nwetara ya, anyị ga-enwe ike ikpokọta taịl nile iji wuchaa etoju. Ka anyị kwuo na ị ga-enye ya obere oge ịchọta igwe ahụ nke nwere ike ijikọ anyị na egwuregwu a.
Otu kpọrọ Ndewo Obodo 2048 nke mara ezigbo mma, ma n’enweghị ihe ga-eme ka anyị daa mmụọ ma ọ bụ daa ogbi. N'ozuzu ya, ọ na-emezu ọrụ nke mgbagwoju anya ma ọ nweghị ihe na-emebi egwuregwu ahụ, ewezuga ihe mgbasa ozi na-adịgide adịgide.
Ndewo Town 2048 bụ nọmba egwuregwu ọhụrụ na nke ị nwere ikpokọta taịl nile iji wuchaa 2048. I nwere 3 nkà na-enyere gị aka ịgafe etoju ma si otú ahụ wuo obodo gị. Ma ọ bụrụ na-amasị gị ọnụ ọgụgụ adịghị echefu Sudoku a.
Inwe ezigbo oge mgbe anyị nwetara nko na ijikọta taịl ọnụ ọgụgụ.
O nwere ike ijide gị na egwuregwu ya
Varietydị akpụkpọ anụ na ọdịnaya dị iche iche
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Wulite obodo gi site na ijiko onu ogugu na Hello Town 2048